မောင်စေတနာ: အင်တာနက် 20 % လောက် ပိုမြန်စေချင်ရင်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နှေးကွေးလှတဲ့ အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်ကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ သုံးချင်ကြတာ လူတိုင်းအားလုံးပါပဲ။ ဒီတော့ ဆက်သွယ်ရေးက မြန်အောင်မလုပ်ပေးတော့ မိမိတို့ဘာသာ မြန်အောင် နည်းလမ်းတွေ ရှာဖွေရပါတယ်။ ယခု နည်းလမ်းကတော့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ မြန်လာနိုင်ဖွယ် ရှိပါတယ်။ ပြုလုပ်ကြည့်ပါ။
1. Start Menu--->> Click Run ကိုရွေးပါ။
2. Type gpedit.ms c ရိုက်ပါ။
3. Enter ခေါက်ပါ။
4. ဘယ်ဘက်ခြမ်းက Computer Configura tion ကို Expand လုပ်ပါ။
၅. Administr ative Templates ကို Expand လုပ်ပါ။
၆. Network ကို Expand လုပ်ပါ။
၇. Qos Packet Scheduler ကိုရွေးပါ။
၈. ပြီးလျှင် ညာဘက်ခြမ်းက Limit ReservableBandwidth ဆိုတဲ့စာကြောင်းပေါ်မှာ double Click နှိပ်ပါ။
၉. Limit ReservableBandwidth Propertie s box မှာ Enableoption ကိုရွေးပါ။
၁၀. Bandwidth Limit [%] box မှာ 0% ပြောင်းပြီး okနှိပ်ထွက်ပါ။
၁၁. Restart ချလိုက်ပါ။
ကိုစေတနာရေ မြန်နှုန်းမြှင့်မယ်ဆိုလို့ လိုက်လုပ်ကြည့်ပါတယ်။ ၂၀ရာနှုန်းပြောင်းပြီးသား တွေ့တယ်။ ပီစီက ရုံးကအများသုံးဆိုတော့ တစ်ယောက်ယောက် ပြင်ထားတယ်ထင်ပ။
ထပ်တိုးလို့ ရအုံးမလား။ :P
11:26 AM, September 28, 2008
သိသိသာသာကို နှေးသွှားသလိုပါပဲ..အစကကျွှန်တော့်ကန်ပျူတာမှာ timie 150ms ရှိရာကနေ 300 Ms တွှေပါဖြစ်သွှားတယ်..ဘီလိုလုပ်ရမလဲ .. :P
1:34 AM, October 14, 2008
အကိုပေါ်မှာပြောထားတာdownload လုပ်တဲ့ အချိန်မှာအနည်းငယ်မြန်အောင်ဆိုပြီး0%ထားခိုင်းထားတယ်ပြီးတော့ အောက်မှာအင်တာနက်၂၀%လောက်ပိုမြန်စေချင်ရင်ဆိုပြီး၂၀%ထည့် ဖို့ ပြောတယ်အဲ့ ဒါကကွာခြားနေတယ်ကျွန်တော်နားမလည်လို့ ..downloadလုပ်ရင် ၀%ကိုပြန်ပြောင်းပေးရမှာလား...ရင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျာ......
2:36 AM, September 04, 2009